May Nyane: မြသီလာအလွမ်းပြေ(၂၆)
“ကျမတို့ သားအဖက ပုဂံရောက်ပြီဆိုရင် ဓမ္မာရံကြီး တစ်ခုတည်းမှာ တမနက်ကုန်နီးပါး..”
ဟဲ ဟဲ ဟဲ အမရေ ပုဂံခရေဇီ စာရင်းထဲ ကျွန်တော်လဲပါတယ်။
ကျွန်တော် အချစ်ဆုံးမြို့ပါပဲ အမရေ
ကျွန်တော်နှိပ်စက်တာနဲ့ မြသီလာလဲ ဆက်မရေးရဘူးဆိုတော့ ဟီး ဟီး တောင်းပန်ပါ၏
အန်တီမေငြိမ်းရေ.. သားတော့ ဖတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖတ်ပစ်လိုက်တာ ခဏလေးရယ်... ဆက်ရေးတာတွေကို မျှော်နေပါ့မယ်.. အန်တီ့ခံယူချက်လေးတွေကို ဖတ်ပြီး တခါတခါသဘောကျရင်းပြုံးပြုံးမိတယ်.. ။
အတူတူဘဲ လင်းတို့ လဲ ပုဂံကို မဖျက်ခင် နောက်ဆုံးဆိုပြီး သွားခဲ့ကြသေးတယ်။
ခုပုဂံကတော့ အရင်လို မလှပတော့တာ ၀မ်းနည်းဖို့ သိပ်ကောင်းတာ
ဆရာမပိုးကောင်နီနီထွေးထွေးလေးတွေ မိုးရွာပြီးစ အတော်နေကြာရင်ထွက်လာတတ်တဲ့ကောင်လေးတွေကို ကျနော်လည်းချစ်တယ်
၉၆ က..မင်္ဂလာဆောင်လေးတခုကိုလဲ.. မြင်ယောင်ကြည့်သွားတယ်။
အလွမ်းစာတွေ ဖတ်ပြီးခံစားသွားတယ် အမရေ...
ဆရာမရေ ပြောစရာတွေ အများကြီးဘဲ၊ဘယ်ကနေစပြောရရင်ကောင်း
မလဲ။ ကျမရဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို လင့်လုပ်ပြီးစာဖိတ်ပရိတ်ကိုမျှဝေ
ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ဆရာမရေ ကော့ကွန်းဂူကဓါတ်ပုံတွေသေ
သေချာချာသိမ်းထားပါအဲဒါ သမိုင်းဝင်ပုံတွေ နော် ။
ဒေါ်ခင်မင်းဇော် ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကို ကျမလည်းရောက်တယ်၊ နီလာနဲ့ 
အတူရှိနေတယ်။ ဆရာမရဲ့ ဓါတ်ပုံအရဆိုရင် အန်တီစုတို့ လူကြီးတွေနဲ့ 
မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်မှာ ကျမတို့ ထိုင်ကြတာလေ ၊
ဟုတ်တယ် ကျမကိုမိတ်ဆက်တော့လည်း အကျဉ်းကျဘူးတယ်ဆို
တာကို ထည့်ပြောဖြစ်တယ်ထင်တယ်။ အန်တီစုက လေးစားပါတယ်
ဆိုတာကို ဖွင့်မပြောပင်နဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ပြောတာ ကျမရခဲ့တယ်။
အဟဲ ကြုံတုန်းကြွားရအုံးမယ် အန်တီစု အသက် ၆၀ ပြည့်တဲ့နှစ်တုန်း
က အင်္ဂလန်က နံမည်ကြီး အမျိုးသမီးမင်္ဂဇင်း တခုမှာ အန်တီစုအ
တစ်ပုဒ်လုံး သေချာဖတ်သွားပါတယ် ဆရာမရေ…အရမ်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ
ခုထိ ပုဂံနဲ့ ပတ်သက်ရင် မျက်ရည်မခိုင်သေးပါ။ အနှိပ်စက်ခံရတာတော့ ရှိပါစေတော့.. ဒီလိုပဲ သယ်ရင်းတွေ.. မောင်တွေ.. အကိုတွေ.. ညီမတွေ နှိပ်စက်တာမျိုး ခံနေရကျ....
သားပြုံးမိစရာ ဘာတွေများ ရေးမိပါလိမ့် :P
ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ကိုမှ ထိန်းရကောင်းမှန်း မသိတဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ ကြုံရတာကိုက မြန်မာပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာထင်ပါရဲ့။ ဒါတောင် မြောက်ဦးမြို့ဟောင်းအကြောင်း အမ မရေးဖြစ်သေးဘူးနော်။ တကယ် ကြေကွဲစရာပါပဲ.. အဲဒါလည်း။
ဟုတ်တယ်.. အဲဒီအကောင်လေးတွေကို နတ်သမီးကွမ်းသွေးလို့ခေါ်တာ.. တကယ်လှတယ် နော်။ အပယ်ရတနာနားမှာ ပိုတွေ့ရတယ်။
ကေရေ.. မင်္ဂလာဆောင်လေးက တကယ်ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းတာ.. ကာယကံရှင်က မရေးလို့ ကြားလူက ၀င်ရေးနေရတာ.. ။ ကာယကံရှင်က ရင်အခုန်လွန်သွားပုံရတယ်.. ခိခိ။
မျှော်နေတဲ့သူတွေ ရှိတော့ ရေးရတာ သိပ်အားရှိပါတယ်။
ကိုရဲရေ.. ကိုယ်တိုင်လွမ်းခဲ့တာလေးတွေလည်း ရေးဦးလေ။
သိမ်းထားတယ်.. ကော့ဂွန်း.. ရသေ့ပျံမှာ ရိုက်ခဲ့သမျှ ရှိတယ်။ Blog လေးမှာ စိုးလို့ သိပ်မတင်တော့တာပါ။ အဲဒီဂူလေးတွေအကြောင်းလည်း သိစေချင်လို့ link ပေးလိုက်တာပါ..။ အမလည်း မေကျောင်းသူ ဘလော့လေး ၀င်ဖတ်တာမို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဂုဏ်ယူပါတယ်...
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရေးတဲ့သူကလည်း တကယ် မျက်ရည်နဲ့ ရေးခဲ့တာမို့ ဖြစ်မှာနော်.. :(
ကျေးဇူး.. အမလည်း သေချာ ရေးထားပါ၏...
ခေတ်ကြီးကို အလျားလိုက်ဖြတ်ပြီး ပြသလိုပါပဲလား။
ပုဂံဖျက်တဲ့အကြောင်းကို ပုဂံလက်သစ်ဆိုပြီး ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်းက အဲဒီတုန်းက တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်မှာ စာတမ်းဖတ်တာ နားထောင်ဖူးတယ်။
မကြည်ခင် မင်္ဂလာဆောင်က ပျော်စရာကြီး။ ထူးမြတ်လေး အိပ်နေတာလဲ ချစ်စရာ။ ကဗျာတွေကလဲ ကောင်းပါ့၊ ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့လဲ လိုက်ပါ့ ဆရာမရေ။
ဟုတ်တယ်ဆရာမ ကျနော့နယ်က အိမ်ရှေ့မှာလဲ အများကြီးရှိတယ်။ ကျနော်တော့ သူတို့ထွက်လာရင်ပြောနေရောလေ...
hi the teacher with Rayban u mentioned here is Shwe Pyi Soe?If he is shwepyisoe, i want to tell one thing about him. His bad habit is that he stole books from friends, colleagues,and library.He always say he isanephew of Than Shwe,like his uncle he isathief.
Weik Zar.. လူတိုင်းလိုလိုပါပဲ... လူသားပီသ ရင်တော့ သူတို့ကို တကယ် မချစ်လောက်ဘူးထင်တာပဲ။
ဟုတ်ပ မနော်ရေ.. အမလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း။
ချိုသင်းရေ.. ကိုယ့်အလွမ်းတွေ ရေးရင်း ခေတ်ကို ပြနိုင်အောင်လည်း အားထုတ်ထားတာပါ :) ..။
Nicholas.. ပြောချင်ဘူး.. ပြောချင်ဘူး... :D